ग्राफिक डिजाइन २०१२ को लागि ल्यापटप कसरी छनौट गर्ने - क्रिएटिभोस अनलाइन | क्रिएटिव अनलाइन
जब हामी नयाँ ल्यापटप किन्ने निर्णय गर्छौं, हामी शंकाको संसारले आक्रमण गर्छौं। यो तार्किक छ। सबैजना एक कम्प्युटर वैज्ञानिक होइन वा उनीहरूलाई के चाहिन्छ भनेर वास्तवमै थाहा छ। यदि तपाईं भिडियो गेम खेलाडी हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई केहि स्पेसिफिकेशन्सको आवश्यक पर्दछ। यदि तपाईं ग्राफिक डिजाइनको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ, अन्यहरू र यदि तपाईं प्रशासनिक हुनुहुन्छ भने, अन्य बिल्कुल फरक छन्।
यो ग्राफिक डिजाइन को लागी प्रयोग गर्न को मामला मा तपाईंलाई ठूलो शक्ति चाहिन्छ। एक्सेल जस्ता प्रशासनिक प्रोग्राम ग्राफिक डिजाइन प्रोग्राम जस्तै इलस्ट्रेटरको रूपमा हुने छैन। यो जानेर हामी आफ्नो कम्प्युटरको विशेषताहरु बढाउछौं। र्याम, ग्राफिक्स र अन्य तत्वहरू जस्तै स्क्रिनले प्रभाव पार्छ। यो खडा हुनेछ यसैले कम्प्युटरको लागत। हामी विभिन्न अनुभागबाट ल्यापटपको विशेषताहरू रचना गर्न गइरहेका छौं, पैसा अनुसार हामी चाहानुहुन्छ वा लगानी गर्न सक्दछौं। त्यो हो, हामी प्रदर्शनको न्यूनतमको लागि कम्प्युटर बनाउन गइरहेका छौं।
हामी हाम्रो लागि हार्डवेयर को सबै भन्दा महत्वपूर्ण भागहरू संकलन गइरहेका छौं ग्राफिक डिजाइन को लागी कम्प्यूटर। यी आवश्यक भागहरू हामी कमसेकम गर्न सक्दछौं जहाँ हुनेछ नेतृत्व स्विंग जब यो राम्रो ल्यापटप प्राप्त गर्न आउँछ। यद्यपि यो स्पष्ट छ, तिनीहरू सबैभन्दा उच्च बजेटको साथ हुन्।
1 प्रोसेसर, अपरेशनको दिमाग
2 र्याम मेमोरी
3 ग्राफिक कार्ड, टुक्रा हामी सबैको लागि हेर्दछौं
4 हार्ड ड्राइभ, राम्रो SSD
5 अन्य उपकरणहरू
प्रोसेसर, अपरेशनको दिमाग
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यसका वरपरका सबै चीजहरू चल्नु पर्छ। तपाईले यस सम्बन्धमा बचत गर्नु हुँदैन र हामीले एउटा एलिमेन्टको आधारमा छनौट गर्नुपर्दछ जस्तै ग्राफिक्स कार्ड जुन हामी पछि कुरा गर्नेछौं।
इंटेल प्रणालीसँगै जान सजिलो छ, धेरै व्यापक प्रोसेसर। एप्पल "मित्र" र मोडेलको एक विस्तृत श्रृंखला। म जोड दिन्छु, किनकि त्यहाँ AMD प्रोसेसरहरू छन्, जुन कम 'फेम' को साथ, प्रयोगको लागि पनि धेरै इष्टतम हो।
यस पक्षमा विचारहरूको भेरियन्टहरू छन्। ग्राफिक डिजाइन को मामला मा, यो एक उच्च-प्रोसेसर प्राप्त गर्न राम्रो छ, ताकि ती मध्ये कुनै पनि तपाइँको लागि समस्या बनाउँदैन। यहाँ आर्थिक हस्तक्षेप। ल्यापटपमा हामी प्राय: पूर्वनिर्धारितद्वारा इंटेल पाउँछौं इंटेल i7 प्रोसेसरको साथ ल्यापटप खोज्नुहोस् (जेनेसन र स्पीड वर्षमा निर्भर गर्दछ)। र कम्तिमा नयाँ जेनेरेशनको इंटेल i5 प्रोसेसर, तर दिमागमा राख्नुहोस् कि Intel i9 प्रोसेसर बाहिर आए, त्यसैले प्रत्येक वर्ष यो पार गर्दछ यो पछाडि पछाडि हुनेछ। यदि तपाइँ एएमडी प्रोसेसरको साथ ल्यापटप फेला पार्नुभयो भने, यो AMD राइजर and र माथि निश्चित गर्नुहोस्।
कोरहरूको संख्या र उनीहरूको प्रदर्शन पनि महत्त्वपूर्ण छ। केहि कार्यक्रम र कार्यहरूले कोरको ठूलो संख्याबाट फाइदा लिन्छन्, जस्तै रेन्डर गर्ने प्रक्रिया समावेश गर्दछन्, जबकि अन्य अवस्थामा यसलाई कम कोरहरू हुने सल्लाह दिइन्छ तर अधिक शक्तिसँग।
र्याम सायद सबैभन्दा लचिलो तत्व हो। र म यो भन्छु किनकि तपाईंलाई उत्तम ब्राण्डको आवश्यक पर्दैन। ल्यापटपको साथ समस्या यो छ कि कस्तो प्रकारको रैम जान्न गाह्रो छ। तर यदि हामीले आफूलाई जीग्सको संख्या र उनीहरूसँग रहेको मेगाहर्ट्झको गतिबारे राम्ररी जानकारी दिनुपर्दछ।
हामीलाई चाहिने न्यूनतम 8 जीबी हो र्याम मेमोरी। र सबैभन्दा सिफारिश १ 16 जीबी हो। त्यो अन्तरालमा तपाईं १२ जीबीको लागि रोज्न सक्नुहुन्छ। सबै ल्यापटपको विशेषताहरूमा निर्भर हुन्छ। गति १ 12०० मेगाहर्ट्ज हुनुपर्दछ किनकि अघिल्लोहरू निकै पुरानो हो।
ग्राफिक कार्ड, टुक्रा हामी सबैको लागि हेर्दछौं
जब यो ल्यापटप खरीद गर्न आउँछ, हामीले खोज्ने पहिलो कुरा भनेको लेबल हो जसले भन्छ तपाईको ग्राफिक्स कार्ड। AMD बाट त्यो रातो लेबल वा Nvidia बाट अधिक विशिष्ट हरियो। केही व्यक्तिहरू यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर सोच्न पनि गलत छन्। जे होस् पक्कै पनि यो ठूलो महत्त्वको छ, यदि माथिका तत्त्वहरूलाई ध्यानमा राखिएको छैन भने, यो महत्त्वपूर्ण छैन।
यदि हामीले अघिल्लो तत्त्वहरूलाई हेरेका छौं र हामी सहि छौं भने हामीले त्यो लेबल हेर्नुपर्नेछ। GTX वा RADEON र असीम संख्या तिनीहरूमा देखा पर्नेछ। तस्बिर प्रशोधनको गति दिन ग्राफिक्स कार्डले CPU लाई समर्थन गर्दछ, र सहि मोडेलले हामीलाई धेरै समय बचत गर्न सक्छ, त्यसैले तपाईंले आफ्नो छनौटलाई अलग राख्नु हुँदैन।
सब भन्दा व्यापक र एक सम्पादन कार्यक्रम संग यसको अनुकूलताको लागि सिफारिस गरिएको Nvidia हो। यस अवस्थामा हामीलाई सधै मध्यम वा उच्च दायरा चाहिन्छ। Nvidia को ग्राफिक डिजाइन मा विशेषज्ञता Nvidia Quadro दायरा सिर्जना गरेको छ। यदि हामी यो दायराको साथ ल्यापटप फेला पार्न सक्दैनौं, हामी Nvidia Gefor GTX खोज्नेछौं। यो तरिकाले हामी हाम्रो प्रणालीमा एकीकृत ग्राफिक्स कार्ड नखोज्ने कुरा निश्चित गर्दछौं।
हार्ड ड्राइभ, राम्रो SSD
तपाईले डिजाइन गर्नु पर्ने सबै प्रोग्रामहरूको वजन हार्ड डिस्कले बोक्ने छ। अपरेटिंग प्रणालीबाट सुरू गर्दै। यो छ जहाँ हामी छिटो हार्ड ड्राइव को लागी तौल गर्न को लागी छ। यो सोच्न र ठूलो क्षमताको हार्ड ड्राइभमा निर्णय गर्न सामान्य छ। धेरैको लागि गुणस्तर र विश्वसनीयतामा बराबर हुन्छ। अर्कोतर्फ, यो हाम्रो कम्प्युटर को लागी तौल को केही छैन। RPM मा गति र एक्रोनिम SSD सबैभन्दा प्रभावशाली बिन्दुहरू मध्ये एकमा निर्णय लिन। यद्यपि यो सत्य हो कि एचडीडी हार्ड ड्राइभको साथ ल्यापटपको 5400 7200०० आरपीएमको गति हुन्छ, डेस्कटप एकको r२०० आरपीएमको लागि। एसएसडी हार्ड ड्राइवको पूर्वगती एचडीडी भन्दा उच्च गति छ।
फलस्वरूप तिनीहरू अधिक महँगो हुन्छन् र कम क्षमता ल्याउने झुकाव हुन्छन्। तर क्षमता बाह्य ड्राइभको साथ निश्चित गर्न सकिन्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि छविहरू र भिडियोहरू लोड गर्दा जब तपाईं डिजाइनरको रूपमा तपाईंको काममा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, रेन्डरिंग एक तरल पदार्थ तरिकामा गरिन्छ।। अधिक कार्यमा तपाईंले अवरोध खडा गर्नुपर्दछ, अधिक जोखिम तपाईंले चलाउनुहुन्छ कि प्रणाली ह्याs्ग हुन्छ र तपाईंको कागजात मेटाउँछ।
सब भन्दा सुविधाजनक कुरा भनेको सानो एसएसडी हार्ड डिस्क -१२ GB जीबी- र तपाईंलाई चाहिने आकारको बाह्य HDD हार्ड डिस्क हुनुपर्दछ।
एकचोटि तपाईंले आफ्नो ल्यापटप निर्णय गर्नुभयो। खातामा लिनको लागि माथिका सबै तत्वहरू सहित, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंलाई थाहा छ कि डिजाइन गर्दा ल्यापटप बढी असहज हुन्छ। कम से कम यसको मूल उपकरण संग - हामी ट्र्याकप्याड र कुञ्जीपाटी को बारे मा डिफॉल्ट बाट कुरा गर्दै छन्।
यसको साथमा Wacom ग्राफिक्स ट्याब्लेटहरू जस्तै ट्याब्लेट डिजाइन गर्न एक ठूलो मद्दत हुन सक्छ। यदि तपाईं अझै यी ग्राफिक्स ट्याब्लेटको धेरै मन पराउनुहुन्न भने, तपाईं बाह्य माउस र कुञ्जीपाटी रोज्न सक्नुहुन्छ। एक एर्गोनोमिक माउस आवश्यक छ। र किबोर्डको प्रकार प्रत्येकको स्वादमा निर्भर गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ग्राफिक डिजाइनका लागि ल्यापटप कसरी छनौट गर्ने
राम्रो लेख जानकारी को लागी धन्यवाद
Https://www.racocatala.cat लाई जवाफ दिनुहोस्
राम्रो लेख जानकारी को लागी धन्यवाद!
म मल्टिमेडिया र डिजिटल कला अध्ययन सुरु गर्न लागिरहेको छु, मलाई ल्यापटप चाहिएको छ र कुन कुन छनौट गर्ने मलाई थाहा छैन। मसँग ग्राफिक डिजाइनको लागि एक्सपी-पेन डेको प्रो प्यारा ग्राफिक्स ट्याब्लेट छ। मेरो अर्को ल्यापटप के हो भनेर जाँच गर्दैछु (ग्राफिक डिजाइन र फोटो पुनःप्राप्ति कार्यहरूका लागि, विशेष रूपमा फोटोशप, इलस्ट्रेटर र लाइटरूम) जस्ता प्रोग्रामहरू।
तपाई मलाई के सिफारिस गर्नुहुन्छ?
Javierromera लाई जवाफ दिनुहोस्